La kulan taxanaha UMIDIGI BISON X10, taleefanka casriga ah ee ugu habboon dadka xiiseeya | Androidsis
La kulan taxanaha BISON X10 ee UMIDIGI, oo ah taleefanka casriga ah ee ku habboon dadka hiwaayadda u leh
Emilio Garcia | | Aaladaha Android, Mobiles
Waxaan hore u haynaa warar ku saabsan taleefanka casriga ah ee cusub BISON X10 Taxane by UMIDIGI, oo ah moodel ballanqaaday inuu noqon doono ka sii raaga oo ka adkaysi badan kuwa la tartamaya, oo leh tilmaamo casri ah oo aan hoos ku faahfaahin doonno.
1 Batari dheer oo raaga, oo quudhsan
2 Naqshad xarrago leh oo adkaysi leh
3 Awoodda iyo kaydinta si loo waafajiyo
4 Daahfurka iyo qiimaha
Batari dheer oo raaga, oo quudhsan
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee moobiilkani waa baytarigiisa, oo ka kooban 1650 Mah, oo leh xaasidnimo 10W lacag degdeg ah.
Tani, marka la eego ficil ahaan, waxaa lagu soo koobay waxyaabaha soo socda:
550 saacadood oo madaxbannaan oo mobiilku nasto.
52 saacadood oo gobannimo leh wicitaan firfircoon.
28 saacadood oo gobannimo leh wicitaan fiidyow ah.
15 saacadood oo gobannimo ah oo la ciyaarayo cayaaraha aad ugu jeceshahay.
Qof kastaa wuxuu jecel yahay inuu yeesho batari aad u badan, maadaama aadan garanayn goorta aad u baahan doonto inaad isticmaasho moobilkaaga oo aan lahayn xeedho, markaa waa ikhtiyaar aad u fiican inaanad ka welwelin ku shubashadeeda saacado iyo saacado.
Sida uu isagu iska caabin, marka la eego xaqiiqda ah in astaanta ay rabto inay na siiso moobiil adag, waxay leedahay shahaadada IP68 iyo IP69K, iyo sidoo kale NFC oo dhinacyo badan leh, laakiin tani waa faa'iido haddii aan iibsanno nooca Isbaanishka, maadaama is -waafajin loo baahan yahay si loola shaqeeyo bangiyada waddankaaga.
Naqshad xarrago leh oo adkaysi leh
Taxanaha cusub ee BISON X10 wuxuu soo jiitaa dareenkayaga isku darka dhismayaal adag oo leh naqshad xarrago leh. Daboolkiisa dambe kaa tagi maayo mid aan dan ka lahayn, maadaama uu ka samaysan yahay Maro adag oo matag leh, oo leh cidhifyo caag ah, iyo looxyada biraha hormuudka u ah warshadaha, kuwaas oo waxay dammaanad qaadeysaa qaab u gaar ah taleefanka casriga ah iyo difaac adag oo ka dhan ah biyaha, boodhka iyo dhibcaha shilalka isku mar. Waxaas oo dhan, iyada oo ay ugu wacan tahay shahaadooyinka ay leedahay.
Tijaabooyinkan iyo shahaadooyinkan ayaa, si gaar ah, kuwa IP68, IP69K iyo MIL-STD-810G, markaa uma baahnid inaad ka walwasho inaad isaga la aado duurka ama aad samayso hawlo halis badan. Tani waxay kuu oggolaan doontaa inaad ku raaxaysato waxqabadyadaada bannaanka, maadaama uu yahay taleefan si gaar ah loogu talagalay inuu iska caabbiyo dibedda guriga.
Gaar ahaan, shahaadada IP69K waxay u oggolaaneysaa inay ku quusto biyaha ilaa 1,5 mitir 30 daqiiqo oo isku xigta, iyo sidoo kale inay iska caabiso heerkulka sare sida biyaha 80º C. Sida dhicitaannada, waa la tijaabiyaa si u adkeyso shoogyada ilaa 1,5 mitir.
Tan waa inaan ku darnaa a 6,53 inch screen oo leh saamiga 20: 9. Haddii aad la yaabban tahay inuu yahay shaashad weyn ama mid yar: waxaan xaqiijin karnaa inay tahay shaashad weyn, laakiin haddii aad leedahay gacan weyn inaysan kugu kici doonin inaad qabato.
Waad ku mahadsan tahay shaashadan weyn waxaad awoodi doontaa inaad daawato taxanaha aad ugu jeceshahay adigoon indhahaaga wax badan hagaajin, oo kuu oggolaanaya inaad aragto faahfaahin dheeri ah, iyo inaad ku ciyaarto cayaaraha aad ugu jeceshahay si fiican oo aad ugu mahadceliso shaashadda weyn.
Awoodda iyo kaydinta si loo waafajiyo
Taleefankan casriga ahi wuxuu leeyahay qiimo jaban mahadnaq processor -kiisa, Helio P60. Processor dhexdhexaad ah oo si dhib yar uga dhigi doona qiimaha kama dambaysta ah ee badeecada mid qaali ah, markaa waad iibsan kartaa adigoon jeebkaaga gariirsanayn. Si kastaba ha noqotee, ereyada astaanta lafteeda, waa processor awood ku filan u leh hawlo badan, iyo sidoo kale ciyaaro runtii awood badan oo culus.
Sida for awoodaha kaydinta, waxaan helnaa ikhtiyaarro kala duwan oo ku xiran nooca la doortay. Sidaa darteed, waxaan aragnaa in:
BISON X10 wuxuu taageeraa 4GB + 64GB
BISON X10 Pro wuxuu taageeraa 4GB + 128GB
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada moodel (Pro iyo midka caadiga ah) marka laga reebo kaydinta, waa daboolka dambe, tan iyo X10 Pro wuxuu leeyahay dabool caag ah oo loogu talagalay ilaalinta dhibicda lagu daray. Faahfaahin inaad maanka ku hayso haddii aad sida caadiga ah u leedahay khaladaad qaabkan ah, maadaama ay kaa saari karto wax ka badan hal dhib. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay ilaalinta faraha kuwa idinka neceb in shaashadda iyaga lagu calaamadeeyay.
Waxa labada moodel isku waafaqaan ayaa ku jira 20MP kamarad saddex -gees ah, oo lagu soo bandhigay modulkiisa u dhigma, iyo sidoo kale laba badhan oo madax -bannaan oo la beddeli karo.
BISON X10 iyo BISON X10 Pro ayaa laga heli doonaa adduunka oo dhan Oktoobar 11 markay tahay AliExpress, oo leh qiime ka bilaaban doona $ 119.99.
Sidoo kale, UMIDIGI waxay bixinaysaa 10 unug oo BISON X10 ama X10 Pro adduunka oo dhan iyo TWS UMIDIGI AirBuds Pro dhagaha dhagaha. Haddii aad xiisaynayso ka -qaybgalka, waxaad ku biiri kartaa bakhtiyaa -nasiibka oo aad macluumaad badan ka heli kartaa website -ka rasmiga ah ee UMIDIGI.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » La kulan taxanaha BISON X10 ee UMIDIGI, oo ah taleefanka casriga ah ee ku habboon dadka hiwaayadda u leh
3 -da barnaamij ee ugu wanaagsan ee loo eegi karo da 'yarta Android
4 -ta barnaamij ee ugu wanaagsan quudinta Instagram ee Android